ADWUI: BAQSUU MOO DIMOKRAATESSUU WAYYA : Jawaar Mohaammad Subscribe godhaa – Kichuu
HomeAfaan OromooTVADWUI: BAQSUU MOO DIMOKRAATESSUU WAYYA : Jawaar Mohaammad Subscribe godhaa
ADWUI : BAQSUU MOO DIMOKRAATESSUU WAYYA :Jawaar Mohaammad Subscribe godhaa
It is really impressive that the Ethiopian Broadcast Authority has began daily monitoring of broadcast and provide summarized feedback. Although I might disagree with some of their assessments, ai found feedback quite detailed and contractive. Such feedbacks should be followed with one on one discussion with each media house as well as with all media house editors. For now I say good job to the EBA !!
Walitti Baquu ADWUI Ilaachisee
Yaada Jawaar ~ Axeeraraa
Jawaar dhimma walitti baquu ADWUI ilaalchisee barruu dheertuu takka maxxanseera. Barruu dheertuu tana dubbistanii xumuruuf akka rakkachuun maltan ifa. Barruu tana erga barreessee ji’aa ol akka dabre dubbateera. Ji’a guutuu wanti inni hin maxxansiniif tarii keessaan mariisisee furmaata laadha jedhee yaadee akka tahuun malu nama hin shakkisiisu.
Yaadrimeen barruu sanaa kanneen asii gadiiti;
1. ADWUIn takkoo ijoo sadi kan qabu tahuu isaa addeesse. Rakkoolen sadeen kun ol’aantummaan Wayyaanee dhaabicha keessa turuu, paartileen sabaaf sablammoota biroo moggaatti maqfamuufii Abbaa Irruummaa tahuu isaa addeesse;
2. Paartiin walitti baqfamee ijaaramu kuni paartilee maqaa sabaatiin ijaaraman kanneen akka ODP guutumatti kan dhabamsiisufii paartiin haaraan uumamu ( EPP) Oromoo caalaa warra Amaaraa kan fayyadu tahuu isaati;
3. Paartiileen maqaa Sabaatiin socho’aa turan yoo maqaa kana ofirraa mulqanii filmaataaf socho’an kan garagalee isaan ilaalu kan hin jirre tahuu isaa;
4. Wayyaaneen paartii haaraa ijaarame keessaa kan ari’amtu tahuu isaatiin walqabatee Riqichi Mootummaa Federaalaaf Tigraay jidduu jiru kan citu tahuu isaatiifii kunimmoo boru balaa biraa kan dhalu tahuu isaati. Wayyaaneen akka waan humna hin qabnee tuffatanii dhiisuun sirrii miti. Meeshaan waraanaa achii hin bahin jira, ammaahuu Naannoon Federaalarraa citaa jirti, kan walitti isaan hidhaa jiru ADWUI qofa. Dabalata kanaatiin Wayyaaneen jiraachuun sirna federaalizimii kana diiguudhaaf warra socho’an laaffisuuf ni fayyaddi;
5. Ummanni Oromootis tahee Paartileen siyaasaa Oromoo jijjiirama ADWUI dhaan gaggeeffamuuf jiru kanaan wal qabatee waan dhufu hundaaf of qopheessuu dandahuu qabu. Oromoon diigamee dantaa ofii eegsifachuu hin danda’u. Paartileen keenya walitti dhufanii faaydaa ummata isaanii kabajchiisuuf qophaawoo tahuu qabu;
Walumaagalatti yaada Jawaar barreesserraa kan hubannu yeroo kanatti walitti baquun ADWUI Ummata keenyaaf faaydaa isaarra miidhaan isaa kan caalu tahuu isaafii faaydaa warra Amaaraa kan tumsuufii fayyadu tahuu isaati✍🏾